ကိစ္စရပ်များ လိုအပ်နေတယ် အာရုံစူးစိုက်မှု in အမြင်ဆိုင်ရာ ဖိုင်ဘာ ကေဘယ်လ် - သတင်း - Ningbo Melontel ဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်းကိရိယာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
နေအိမ် > သတင်း > စက်မှုလုပ်ငန်းများ & လျှောက်လွှာများ
ကိစ္စရပ်များ လိုအပ်နေတယ် အာရုံစူးစိုက်မှု in အမြင်ဆိုင်ရာ ဖိုင်ဘာ ကေဘယ်လ်
၁ ။ optical cable ကိုမတင်ခင်၊ အပေါက်ကိုသန့်ရှင်းပြီးစစ်ဆေးသင့်တယ်။ သန့်ရှင်းရေးကိရိယာကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ပလတ်စတစ်ပြွန်၏အတွင်းအချင်းသည် optical cable ၏ပြင်ပအချင်း၏ ၁.၅ ဆဖြစ်သင့်သည်။ Zhongbu သည်ဘိလပ်မြေပိုက်တွင်းတွင်း၌ပိုက်၏ ၂ သို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောနေရာတွင်ပိုက်၏အချင်းသည်စုစုပေါင်းညီမျှသောအပေါက်၏ ၈၅% ထက်နည်းသင့်သောအခါဖြစ်သည်။
2. ပလပ်စတစ်ပြွန်အားမရ။ နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောပလပ်စတစ်ပြွန်များကိုဝတ်ဆင်ပါကပြွန်မတူသောအရောင်များရှိသည့်အခါပြွန်၏အဆုံးများကိုမမှတ်ပါ။ ပိုက်အရောင်တူညီသည်သို့မဟုတ်လုံးဝမအရောင်ဖြစ်လျှင်, အဆုံးမှတ်သားရပါမည်။ ပလတ်စတစ်ပိုက်၏ဖြန့်ဖြူးသည့်အရှည်သည်မီတာ ၃၀၀ ထက်မပိုစေနှင့်ပလတ်စတစ်ပိုက်ကိုပိုက်၏အလယ်တွင်မချိတ်ဆက်သင့်ပါ။ ထို့အပြင်ပလပ်စတစ်ပြွန်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင်၎င်း၏အရည်အသွေးကိုမထိခိုက်စေရန်ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်သည် -5 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ + 35 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကြားတွင်ရှိသင့်သည်။ ပလတ်စတစ်ပိုက်များကိုအချောလိုက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဘိလပ်မြေပိုက်ဖြင့်အချိန်မီတပ်ရမည်။ ထို့အပြင်၊ အခြားအရာဝတ္ထုများကိုပြွန်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် nozzle ကိုယာယီပိတ်ထားသည်။ ဒီဇိုင်း၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီပလတ်စတစ်ပိုက်ကိုတွင်းထဲတွင်လုံလောက်စွာထားရမည်။
3. ဖိုင်ဘာ optic cable ကိုဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲ။ အဓိကကေဘယ်ကြိုး၏အရှည်သည် ၁၀၀၀ မီတာထက်နည်းရမည်။ ကေဘယ်လ်ကြိုးများ၏တင်းမာမှုကိုလျှော့ချရန်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်အကွာအဝေးကိုကျော်လွန်သွားပါကအလယ်အနေအထားရှိအပိုင်းအစများသို့မဟုတ်အရန်နေရာများကိုအလယ်အလတ်အနေအထားတွင်အသုံးပြုသင့်သည်။ ပုံရိပ်ဖမ်းသောကြိုးအားပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်အလို့ငှာကြိုးသည်ပိုက်၏အပေါက်၊ ပိုက်၏ကွေးသို့မဟုတ်ဖြတ်သန်းသွားသောဖိုင်ဘာအော့ပတစ်ကေဘယ်ကြိုးသည်လမ်းဘေးကိရိယာသို့မဟုတ်ခေါင်းလောင်းကာကွယ်ရေးပြွန်ကဲ့သို့သောကာကွယ်ရေးအစီအမံများကိုပြုလုပ်သင့်သည်။ သည်အခြားအတားအဆီးများနှင့်အတူ။ ထို့အပြင်ကြားနေချောဆီကို optical cable ၏အပြင်ဘက်တွင် အသုံးပြု၍ cable အားဆွဲလိုက်သောအခါပွတ်တိုက်မှုခုခံမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
4. အရံစရိတ်။ Optical Cable ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက် Optical Cable ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ pallet ထဲမှာအပေါက် (သို့) လက်အပေါက်တစ်ပေါက်စီထားသင့်ပြီး fiber cable ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်မဖြစ်စေရန်သင့်လျော်သောခွင့်ပြုချက်ကိုချန်ထားသင့်သည်။ အပေါက်သို့မဟုတ်လက်တွင်းအပေါက်ထဲသို့ထည့်သွင်းရန် optical cable ၏အရှည်ဇယား P78 2-3 မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့နိမ့်ဆုံးနှင့်အညီထားရှိမည်ရလိမ့်မည်။
5. ပူးတွဲကုသမှု။ အဆိုပါ optical cable ကိုပိုက်၏အလယ်၌ရှိပိုက်အပေါက်ချိတ်ဆက်မရ။ Fiber optic cable ကို manhole တွင်မချိတ်ဆက်ပါက fiber optic cable ကိုကွေး။ တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒီတွင်းပေါက်ကိုတိုက်ရိုက်ဖြတ်မသွားဘူး။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သူကဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကိုထိခိုက်ပြီး optical cable ပျက်စီးစေမှာဖြစ်တယ်။ ဖိုင်ဘာအော့ပတစ်ကေဘယ်တွင်အဆစ်တစ်ခုရှိပါက၎င်းကိုမြွေရေပိုက်သို့မဟုတ်ပျော့ပျောင်းသောပလတ်စတစ်ပိုက်ဖြင့်ကာကွယ်သင့်သည်။ ၎င်းကိုပုံသေတပ်။ ချိတ်ထားနိုင်သည်။
6. ပလပ်နှင့်မှတ်ပုံတင်။ ပိုက်သို့မဟုတ်တွင်းပြွန်ထဲမ ၀ င်စေရန်ပိုက်အပေါက်၏ထွက်ပေါက်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထားသင့်သည်။ Optical fiber ကေဘယ်လ်နှင့်၎င်း၏ splicing တို့သည်မှတ်ပုံတင်အမှတ်အသားရှိသင့်ပြီးနံပါတ်၊ အမျိုးအစားနှင့်သတ်မှတ်ထားသောကေဘယ်ကြိုး၏သတ်မှတ်ချက်စသည်တို့ကိုဖော်ပြသင့်သည်။ အအေးမိဒေသများ၌အအေးကြောင့်ပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်နှင်းခဲဒေသများတွင်ကာကွယ်သင့်သည်။ အကယ်၍ optical cable သည်ထိမိခြင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားပါက partition ကာကွယ်မှုအတွက် insulation board ကိုအပေါ်ဘက်တွင်ထားရှိနိုင်သည်။